people Nepal » चीनले किन बन्द गर्यो रसुवागढी नाका ? चीनले किन बन्द गर्यो रसुवागढी नाका ? – people Nepal
चीनले किन बन्द गर्यो रसुवागढी नाका ?
बैशाख १७,विदुर – नेपालको चीनसँग सञ्चालनमा रहेको एकमात्र रसुवागढी नाका फेरी बन्द भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । चीनले बाटो मर्मतको कारण देखाउँदै नाका बन्द गरेको रसुवा प्रहरीले जनाएको छ।